​न्युरो सर्जन डा. देवकोटालाई नेपाल ल्याइयो, न्यूरो अस्पतालमा उपचार हुँदै
न्यूजलय बुधबार १९, बैशाख २०७५
काठमाडौं । न्युरो सर्जन डा. उपेन्द्र देवकोटालाई पाँच महिना लामो उपचारपछि नेपाल ल्याइएको छ । उनको बेलायतस्थित किङ्स कलेज हस्पिटलमा उपचार भैरहेको थियो ।
बाँकी उपचार नेपालमै गराउने इच्छा अनुसार डा. देवकोटालाई तीन दिनअघि नेपाल ल्याइएको हो । अहिले उनको बाँसबारीस्थित न्यूरो....
​श्रीमानको कुटाइबाट श्रीमतीको मृत्यु
लहान । सिरहाको गोलबजारमा श्रीमानको कुटाइबाट गएराति एक महिलाको मृत्यु भएको छ । गोलबजार –७ चोहर्वा का ३५ वर्षीय कृष्ण शर्माको कुटाइबाट २३ वर्षीया श्रीमती प्रभादेवी शर्माको मृत्यु भएको माइती पक्षले आरोप लगाएका छन् ।
गएराति मरणासन्न हुने गरी कुटपिट गर्दा बेहोस....
​चितवनमा अज्ञात समूहद्वारा तीन हजार केराको बोट नष्ट
न्यूजलय मङ्गलबार १८, बैशाख २०७५
चितवन । चितवनमा ३ हजार बढी केराका बोट अज्ञात समूहले काटेर नष्ट गरेको छ। १२ जना किसानले लगाएको केरा बगानमा अज्ञात समूहले केरा नष्ट गरेको केरा व्यवसायी संघ चितवनका अध्यक्ष विष्णुहरी पन्तले बताए ।
गएराती ३ हजार ९४ वोट केरा....
​सीमाका नेपाली भट्टीमा भारतीयहरुको भीड
विराटनगर । भारतको बिहार राज्यमा मदिरा बिक्री तथा उपयोगमा रोक लागेको छ । जसको कारण सीमावर्ती नेपाली बजारमा भारतीय मदिराप्रेमीको भीड बढ्न थालेका छ ।
बिहारबाट नेपाली क्षेत्रका भट्टी र होटलमा आउने भारतीयहरुको संख्या बढेको हो ।
विराटनगरमा रघुपति जुटमिलको दक्षिणद्वार, हड्ताली हाट,....
फेसबुकको चिनजान : केटी भनेर केटासँग भागी विवाह
धनकुटा । फेसबुकमा लामो समयको कुराकानी अनि त्यसपछिको भेट र विवाह । यति लामो प्रक्रियामा केटी भनेर सोचिरहेको व्यक्ति विवाह पछि केटा भएको थाहा पाउँदा के हुन्छ होला ? धनकुटामा यस्तै भएको छ ।
धनकुटाको सहिदभूमी गाउँपालिकास्थित छिन्ताङमा यस्तै घटना घटेको छ....
​पुर्जामा बुझिने अक्षरमा लेख्न डाक्टरलाई निर्देशन
काठमाडौं । बिरामी जाँचेको पुर्जामा बुझिने गरी औषधीको नाम, चिकित्सकको नाम तथा काउन्सिल दर्ता नम्बर लेख्न चिकित्सकहरुलाई निर्देशन दिइएको छ ।
नेपाल मेडिकल काउन्सिलले यस्तो निर्देशन दिएको हो । चिकित्सकले प्रेस्किप्सनमा लेखेको कतिपय औषधीको नाम नबुझिँदा गलत औषधीको प्रयोग बढिरहेको पाइएको हो ।
​सप्तरीमा ट्रक र मोटरसाइकल एकआपसमा जुद्दा एक युवकको मृत्यु
राजविराज । सप्तरीको शम्भुनाथ नगरपालिका–३ मा मंगलबार ट्रक र मोटरसाइकल एकआपसमा जुद्दा एक युवकको मृत्यु भएको छ ।
मृत्यु हुनेमा स्थानीयवासी मोटरसाइकल चालक २५ वर्षीय मनोज चौधरी रहेको इलाका प्रहरी कार्यालय रुपनीले जनाएको छ । पूर्वबाट पश्चिमतर्फ जाँदै गरेको स २ प....
​सुनसरीमा श्रमिक अस्पताल बन्ने
इटहरी । सुनसरीमा मजदूरहरूको उपचारका लागि श्रमिक अस्पताल बन्ने भएको छ । नेपाल सरकार श्रम मन्त्रालय मार्फत् अहिले देशका २ स्थानमा अस्पताल बनाउने बारेमा जग्गा खोजीको काम भइरहेको छ ।
मापदण्डभित्र पर्ने गरी सुनसरीको दुहबीमा जग्गा फेला परेको छ । एक नम्बर....
​चित्तल मार्ने छ जना प्रहरीको नियन्त्रणमा
कैलाली । वन्यजन्तु चित्तल मारेर काट्दै गरेको अवस्थामा प्रहरीले छ जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ । कैलालीको टीकापुर नगरपालिका–२ सीतापुरमा स्थानीय गोरख सिंहको कुखुरा फार्ममा जंगली जनावर चित्तललाई मारी काटिरहेको भन्ने सूचनाका आधारमा चित्तलको मासु र काट्न प्रयोग भएको हतियारसहित छ जनालाई पक्राउ गरिएको....
​कीर्ते नागरिकता बनाउन सहयोग गरेको आरोपमा सब इन्जिनियर पक्राउ
सप्तरी । किर्ते नागरिकता बनाउन सहयोग गरेको आरोपमा प्रहरीले राजविराज नगरपालिकाका एक कर्मचारीलाई पक्राउ गरेको छ । नागरिकता नै नलिएका व्यक्तिलाई प्रतिलिपी बनाउन सहयोग गरेको आरोपमा नगरपालिकाका सब इन्जिनियर राजकुमार देवलाई पक्राउ गरेको हो ।
उनले सुनसरीको दुहबी बस्दै आएका सतिष अग्रवालको....
नेपाली भूमी फिर्ता गर्न माग राख्दै डा. केसीद्वारा सत्याग्रहको घोषणा